Kedu ka esi lee mmanụ lemon dị gị mkpa | AromaEasy
Kedu otu esi mmanụ mmanu Lemọngrass baara gị uru
Ihe na February 11, 2020 February 10, 2020 by Aromaeasy
lemongrass mkpa mmanụ uru
Ogwu ogwu ogwu olom
Lemọn bụ ahịhịa na-esi ísì ụtọ nke yiri iyi lemons. Ogwu ya na nri ndi mmadu mara nke oma n’uwa niile.
Nwere ike ịchọta ahịhịa a n'ọtụtụ ihe ọ traditionalụ traditionalụ ọdịnala, gụnyere tii ọgwụ. A na-ahụkwa ya na ncha ncha na ngwaahịa nlekọta onwe onye ndị ọzọ. Enwere ike iji Lemongrass dị ọhụrụ, nke a mịrị amị, ma ọ bụ ọbụna kọọ ma gbakwunye ya dị ka ihe sizininị na ofe.
Ngwakọta ọgwụ ọgwụ lemongrass na tii nwere ike ịgwọ ọrịa dị iche iche, site na nsogbu afọ na ọnya, na cholesterol.
Ọ bụ ezie na iji ogwu a emeela ihe iji gwọọ nsogbu nri digestive na ọbara mgbali elu. Na lemongrass mmanụ dị mkpa nwere ọtụtụ uru ndi ozo di ike.
Dịka ọmụmaatụ, ọ ghọrọ ngwaọrụ a ma ama nke a na-eji ọgwụ aromatherapy, na-enyere ọtụtụ aka ịkwụsị nrụgide, nchegbu, na ịda mbà n'obi.
Osisi Mkpa Lemọn dị mkpa
A na-enweta mmanụ dị mkpa lemon na akwụkwọ ya na ahịhịa nke ahịhịa lemongrass ma nwee isi citrus siri ike.
A kwenyere na mmanụ dị mma nke lemongrass mmanụ dị mkpa nwere antifungal, antibacterial, insecticidal and anti-inflammatory Njirimara. Iji maa atụ, otu ihe dị mkpa mmanụ lemongrass dị mkpa bụ citral, ogige ọgwụ nje. Lemongrass mmanụ dị mkpa nwekwara limonene, ihe a gosipụtara na nyocha sayensị iji belata mbufụt na nje.
N'ime ụlọ ọrụ, ọtụtụ ndị na-emepụta mmanụ na-eji mmanụ lemongrass dị mkpa dị ka isi maka ịchọ mma, soaps na deodorants nke ụlọ.
Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji jiri mmanụ dị ụtọ lemongrass, gụnyere ihe eji eme ihe na nke ime.
Maka iji ya eme ihe, ndị mmadụ na-agwakọta mmanụ dị mkpa n’ime mmanụ ndị na-ebu mmanụ, anụ ahụ, yana ntutu na ngwaahịa anụ ahụ.
Na aromatherapy, can nwere ike itinye lemongrass mmanụ dị mkpa na mmiri ma jiri ya dị ka alụlụ, ma ọ bụ tinye ya na diffuser. Hamalite okpukpo nke mmanụ dị mkpa ma ọ bụ nwee ọtụtụ uru dịka belata mbufụt, isi ọwụwa, na afọ mgbu.
Uru mmanụ lemongrass dịkarịsịrị mkpa gụnyere:
O nwere ike bụrụ ihe na - akwụsị ihe mgbu
Citrus dị na lemongrass mmanụ dị mkpa nwere ike inye aka gbuo ihe mgbu ahụ ebe ọ na -eme ka mbufụt kwụsịlata. Ọzọkwa, ndị ọrụ nyocha n'Australia kwenyere na ihe nwere mmiri lemongrass akpọrọ eugenol nwere ikikere aspirin.
Eugenol na - enyere aka igbochi platelets ghara ịmakọrọ ọnụ. Ọ na - enyere aka ịhapụ serotonin. Anyị niile maara Serotonin bụ homonụ nke na-achịkwa ọnọdụ, ihi ụra, agụụ, na ọrụ ọgụgụ isi.
Dabere na ọmụmụ nke 2017 na ndị mmadụ nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo, mmanụ lemongrass nke sitere na mbelata ihe mgbu ha na-arịa. Dịka nsonaazụ nyocha n'ọmụmụ ihe a, mmanụ lemongrass na-enyere ọkwa mgbu nwayọ nwayọ belata 80% ka 50% n'ime ụbọchị iri atọ.
Dịka onye na - eweta ihe mgbu, a na - etinye ya oge ụfọdụ na:
Wepụ isi ọwụwa - Mmanụ a Lemụ Lemongrass nwere mmetụta na-akụjụ obi. Ọ nwere ike belata ihe mgbu, erughị ala ma ọ bụ nrụgide nke nwere ike ibute isi ọwụwa.
Mgbachi ọnya mbido - Lemongrass nwere ike inyere ụmụ agbọghọ aka izu ike ma wepụta ihe mgbu n'oge ha.
Belata ihe mgbu na akwara mgbu - Ozi ọma maka ndị egwuregwu.
O nwere ike inye aka wezuga nchegbu na nchekasị
Ọtụtụ nnyocha egosila na mmịpụta aromatherapy nwere ike ịkwụsị nrụgide na nchekasị.
Mmanụ Lemongrass, dị ka ihe a na-ejikarị na ọgwụgwọ, nwere ike ịkwalite ntụkwasị obi onwe onye, ​​belata nchegbu na nkụda mmụọ.
Iji nweta uru dị ukwuu na psychotherapy, ọtụtụ ndị ọzọ na spas na-ejikọ ọrụ ịhịa aka ha na aromatherapy. Dịka mmetụta na-esokarị nrụgide, ọbara mgbali elu nwekwara ike ịbelata n'ụzọ a.
Mmanụ a dị mkpa bụ otu n'ime akụrụngwa kachasị mma maka ịgwọ ọrịa, ebe o nwere ihe mgbochi mkpali na akụrụngwa antipyretic.
Dabere na ọmụmụ nke nnwale ụmụ anụmanụ na 2014, ọ na-ekwenye na mmanụ lemongrass mmanụ dị mkpa nwere njigide mgbochi mkpali siri ike.
Ọrịa na-adịghị ala ala nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu ahụike. Ndị a gụnyere ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa obi. Lemongrass nwere citral, ihe na - egbochi oria na - alụ ọgụ megide ha.
Na-eme ka ike gwụ gị
Ngwurugwu Lemongrass na-eme ka ọkwa ume dịkwuo elu ma na-eme ka elekwasị anya.
Ọ nwere ihe ndị na-egbu nje
A na-eji Lemongrass eme ihe dị ka ọgwụ na-agwọ ọrịa iji gwọọ ọnya na igbochi ọrịa. Nnyocha na 2010 chọpụtara na lemongrass mmanụ dị mkpa megide ọtụtụ nje bacteria, gụnyere ndị na-akpata ọrịa ndị na-esonụ.
Akpịrị na-efe efe
Ọ nwere ihe antifungal
Elu bụ usoro dị ka yist na ebu. Mmanụ Lemongrass bụ ihe dị irè iji gbochie ụdị usoro ihe anọ anọ akọwapụtara. Otu n'ime ha na-eme ka ụkwụ onye na-eme egwuregwu, ringworm, na itch jock.
Iji nweta uru, opekata mpe pasent 2.5 nke ihe ga-enwerịrị mmanụ lemongrass.
Antioxidants na-enyere ahụ gị aka ịlụ ọgụ na --anyi na - emebi mkpụrụ ndụ. Nnyocha e mere egosiwo na mmanụ lemongrass dị mkpa na-enyere aka wepu radicals n'efu. N'ihi ya, ọ bụ a ike mmeju ọgwụgwọ maka na-abụghị ịwa ahụ usoro.
O nwere ike inye aka gbochie ọnya afọ ma ọ bụ belata ọgbụgbọ
A na-eji Lemongrass eme ihe dị ka ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke ọtụtụ nsogbu nri, malite na ọnya afọ ruo na ọnya afọ. Dabere na nyocha nke 2012 banyere ụmụ oke, lemongrass mmanụ dị mkpa na-enyere aka igbochi ọnya afọ, nke bụ ihe na-akpatakarị afọ mgbu.
Lemọn bụkwa ihe a na-ahụkarị na teas herbal dị ka ọgwụgwọ nke ọgbụgbọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaahịa herbal na-eji akwụkwọ lemongrass akpọnwụ akpọnwụ, aromatherapy na mmanụ dị mkpa nwere ike inye abamuru yiri nke ahụ.
O nwere ike inye aka belata afọ ọsịsa
Ọrịa shuga bụ okwu a na-ahụkarị, mana ọ nwekwara ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ. Ọgwụ ịgwọ ọria ịgwọ ọrịa nwere ike ịbịa yana ọghọm ndị ọzọ, dị ka afọ ntachi, ịhapụ ụfọdụ mmadụ ka ha gbanwee ọgwụgwọ anụ ahụ.
Dika ihe omumu nke 2006, lemongrass nwere ike inye aka belata oria shuga. Kachasịsị anya, nnyocha egosila na mmanụ a nwere ike belata oke ọnụnọ n’ime ụmụ oke nwere ọrịa shuga na-akpata site na ibelata mgbiri afọ.
O nwere ike inye aka belata cholesterol
Cholesterol dị elu bụ ihe na - ebute oke ohere nke nkụchi obi na ọrịa strok. N'ihi ya, ọ dị mkpa idobe ọkwa cholesterol gị.
Na omenaala, ndị mmadụ na-eji lemongrass agwọ ọrịa kọlestrọl na ọrịa obi. Ọmụmụ ihe ọmụmụ 2007 nyeere aka ịkwado ojiji a na-eji ọnọdụ ndị a: Mọnị Lemongrass nwere ike belata cholesterol na oke nyere nri cholesterol dị elu ụbọchị 14. Dịka ihe akaebe doro anya, nzaghachi dị mma bụ ịdabere na dose, nke pụtara na nsonaazụ ya gbanwere mgbe a gbanwere dose ahụ.
Lemongrass mmanụ dị mkpa nwere ike inye aka ịlụ ọgụ dandruff
O nwere ike inye aka mezie shuga ọbara na lipids
Dabere na nnyocha 2007 banyere oke, mmanụ lemongrass nwere ike inye aka belata shuga ọbara n'ahụ ndị nwere ọrịa shuga 2. N'ime ọmụmụ ihe a, ndị ọrụ nyocha jiri oke dị na 125 ruo 500 mg nke lemongrass.
Nsonaazụ gosiri na mmanụ lemongrass na-achịkwa ọkwa shuga dị n'ọbara. Ọ na - agbanwe pọọm lipid ka ọ na - abawanye ihe akpọrọ cholesterol dị mma (HDL).
Nchọpụta nyocha nke 2015 nyochara arụmọrụ nke lemongrass na mmanụ almọnd dị ụtọ n'oge ịhịa aka. Ndị na - amụ ihe na - anata ịhịa ahụ dị mkpa kwa izu maka izu atọ nwere nsogbu ọbara mgbali ala karịa otu ndị na - achịkwa. Ọ bụ ezie na mmanụ lemongrass emetụtaghị ọbara mgbali na systolic
Biko mara na FDA anaghị achịkwa mmanụ ndị dị mkpa. O siri ike ịmata ma ngwaahịa ị ga-azụta dị ọcha. So ga-azụrịrị mmanụ dị mkpa site na Nsukka ị tụkwasịrị obi.
Tupu itinye lemongrass mmanụ dị mkpa na anụ ahụ gị, ịkwesịrị iji mmanụ ụgbọelu gwuo mmanụ dị mkpa mgbe niile. Usoro akwadoro bụ 3-5 tụlee nke mmanụ dị mkpa kwa teaspoon nke mmanụ ụgbọelu. Ọtụtụ mmadụ na-a massụ mmanụ dị mkpa mmanụ n'ụlọ ha iji nyere aka belata isi ọwụwa.
Na aromatherapy, tinye ihe ruru 10 tụlee nke mmanụ dị mkpa na 1 butere mmanụ mmanụ dị ka mmanụ oyibo, mmanụ almọnd dị ụtọ. Gwakọta mmanụ a gwakọtara n'ime mmiri saa ahụ.
Nwekwara ike inu mmanụ lemongrass ozugbo. Tinye 7-10 tụlee nke Mkpa mmanụ na a mgbasaJuputara na mmiri wee kesaa ya na mgbe - ị na-agbasa ihe dị ka nkeji iri anọ wee gbanyụọ nkeji iri atọ
Note: Ejikwala mmanụ gị mkpa dị na anụ ahụ gị ozugbo.
Kpachara anya na mmanụ LemonGrass mmanụ dị mkpa
Lemon dị ka ahịhịa dị n'ofe nchekwa maka iji ya na nri yana ọ foodụveraụ. Ọ bụ ezie na usoro ị higherụ ọgwụ dị elu nwere ike ịbawanye ohere nke mmetụta ndị ọzọ.
N'ihi ya, ikwesighi iji mmanu di nkpa na akpukpo aru. Tupu iji mmanụ dị mkpa eji eme ihe, anyị na-akwado gị ka ị nwee nnwale nnomi akpụkpọ gị dị mkpa iji chọpụta ma ị na-enwe mmetụta na ha. Nwalee anụ ahụ gị tupu i were ya ọtụtụ. Itinye mmanụ ọ bụla dị mkpa na-enweghị mmerụ na mpaghara buru ibu nke anụ ahụ nwere ike ịkpasu iwe.
Ohere nke ọghọm na ọghọm dị na ya
Dika Lemongrass mmanu di ezigbo mmanu. A mụchaghịkwa nsonaazụ ya ọfụma. Certainfọdụ ndị mmadụ, ha nwere ike ịdị ike karịa ihe ndị dị n’osisi lemongrass.
Lemongrass na-enweghị aha nwere ike ibute mmeghachi ahụ nfụkasị ma ọ bụ iwe anụ ahụ mgbe ejiri ya.
Ihe ndị ọzọ a na-esi n’egedege na-ekwu okwu gụnyere:
Mmanụ ndị dị mkpa nwere ike ịbụ ihe na-egbu egbu mgbe mmanya riri ha. Ekwekwala mmanu mmanu di nkpa.
Gwa dọkịta gị tupu gị ejiri ya:
Ọrịa shuga ma ọ bụ shuga dị ala
Nwere ọnọdụ iku ume, dịka ụkwara ume ọkụ
Inwe ọrịa imeju
Pregnant dị ime
Shouldkwesighi iji lemongrass dị ka usoro ọgwụgwọ kachasị ma ọ bụ n'ọnọdụ ọgwụgwọ gị mgbe ọ bụla maka ọnọdụ ọ bụla ọ gwụla ma ọ bụrụ na n'okpuru nlekọta dọkịta gị.
Na mmechi, ụfọdụ nnyocha gosiri na lemongrass mmanụ dị mkpa nwere ọgwụ antifungal dị ike, ọgwụ nje, ọgwụ ahụhụ na mgbochi mkpali. Agbanyeghị, mmanụ lemongrass ka chọkwuru ọmụmụ tupu o nwee ike ịbụ ọgwụgwọ bụ ama. Mara na naanị iji ụzọ kwesịrị ekwesị ka lemongrass si abara gị uru.
Humidifier na nke Diffuser
Ugdị Plug & Soket